Cuttlefish inoshandisa icon yemavara mu3D mamenyu mamenyu | IPhone nhau
Pese panoburitswa nyowani nyowani, vagadziri zvishoma nezvishoma vanotanga kuchinjisa maficha avo kuti aenderane neyazvino jailbreak-inoenderana vhezheni yeIOS. Asi pamusoro pezvo, vagadziri vatsva, mukuwedzera kune zvakajairwa zvehupenyu hwese, vatangisa matsva matsva, aine mabasa ayo kusvika parizvino isu tanga tisina kuona, kungave nekuti kupunzika kwejere kwanga kusingaenderane kana nekuti edza kutora mukana wezvinhu zvitsva zveIOS zvisina kuwanikwa mushanduro dzekare dze jailbreak. Nhasi tiri kutaura nezveCuttlefish, iyo nyowani tweak iyo inotiratidza iwo mamenyu ezvishandiso zvinoenderana neiyo 3D Kubata basa, iine ruvara rwekushandisa icon, sezvatinogona mumufananidzo unotungamira ino chinyorwa.
Kutenda kuCuttlefish, pese patinosheedza iyo submenu inowanikwa mune zvinoshandiswa zvinowirirana ne 3D Kubata tekinoroji, tinogona kuona kuti sei zvese zviri kumashure uye nemenu yemenu zvinoratidzwa muvara rimwe chete nemuganhu we icon. Mumuenzaniso unotungamira chinyorwa chino, tinogona kuona kuti iyo iBooks application inotitaridza sei kumashure kweorenji, iyo Nhau kunyorera yakatsvuka kumashure apo iyo App Store application inotiratidza iyo yese kumashure kweiyo skrini mune imwechete bhuruu ruvara rwekushandisa.
Apple inogona kutora, kana isati yatove, yeiyi tweak yekushandisa mune ramangwana shanduro dzeIOS. Cuttlefish inowanikwa mahara kuburikidza neimwe nzira Cydia app chitoro. Asi kana iwe usina iPhone 6s kana yakakwira asi iwe unoshandisa iyo Forcy kana RevealMenu tweaks, iwe unogona zvakare kushandisa Cuttlefish kugadzirisa mamiriro emamenu kana iyo 3D Kubata basa rikakumbirwa. Cuttlefish inoenderana neese ari maviri iOS 9 uye iOS 10.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Cuttlefish inoshandisa icon yemavara mu3D mamenyu
Iyo ngano yeApple Chitoro pa5th Avenue ichaendeswa kugadziridzo